SATW Foundation inozivisa vanokunda 2021 veLowell Thomas Travel Journalism Makwikwi
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Awards » SATW Foundation inozivisa vanokunda 2021 veLowell Thomas Travel Journalism Makwikwi
Nhau Nhau • Awards • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • tsika nemagariro • dzidzo • Hospitality Industry • nhau • vanhu • Kuvakazve • Kutarisirwa • ushanyi • Kufamba Wire Nhau • USA Kuputsa Nhau
Vanokunda "vakaratidza kugona kwavo nekuburitsa nyaya dzepakutanga, dzinobatsira uye dzinowanzo fambisa dzaifukidza nguva nemafungiro egore rapfuura," vatongi vakadaro nezvemabasa, aifukidza chirimo cha2020 kusvika kuchirimo cha2021. uye vakaratidza munzira dzakasiyana-siyana kukosha kunogara nebasa ravo. ”
Travel Journalism Inoratidza Mettle yayo muna 2021 Lowell Thomas Awards.
Vanokunda veSATW Foundation Makwikwi vanoita zvakanaka pakubatsira vaverengi kufunga nezvedenda iri
1,278 zvakapinda mumakwikwi egore negore, anotarisirwa neSosaiti yeAmerican Travel Writers Foundation, zvaikosha pamabatiro avo, chiyero uye sevhisi kune vaverengi.
Mutori wenhau wedhijitari, pepanhau redunhu uye ngano yemutori wenhau isingafungidzike yenzombe inotasva mutakuri wendege vaive pakati pevakakunda mibairo yepamusoro mu37th Lowell Thomas Travel Journalism Competition mugore raive risina mepu yemugwagwa.
Izvo zvinokwana 1,278 mumakwikwi egore negore, anotarisirwa ne Sosaiti yeAmerican Travel Vanyori Foundation, dzaikosha pamabatiro avo, chiyero uye sevhisi kune vaverengi vaitambura kuti vanzwisise nzira yekufamba yakatenderedzwa nedenda. Yunivhesiti yeMissouri Chikoro cheJenhau yakatarisa kutonga, uko kwaisanganisira vatongi makumi maviri nevaviri gore rino.
Iwo mibairo yakaziviswa Muvhuro, Gumiguru 4, paSATW Musangano muMilwaukee. Rukudzo runoonekwa seyekutanga nyanzvi kuzivikanwa kwevashanyi venhau nevatauri. Iyo Foundation iri kupa 104 mibairo muzvikamu 27 uye $ 22,550 mumubairo mari gore rino.
Katherine LaGrave, dhijitari inoratidzira mupepeti weAFAR Media, akaremekedzwa saLowell Thomas Travel Journalist wegore. Vatongi vakarumbidza kutaura kwake nyaya uye kurondedzera pamwe nekutarisa kwake pane izvo vaverengi vaifanira kuziva kufamba nzendo dzanhasi dzekufamba.
Cleveland Plain Dealer akawana mubairo weGoridhe wekutepfenyura kwemapepanhau. Vatongi vakataura nezve mupepeti Susan Glaser's "laser inotarisa kune vaverengi" avo vakatsvaga padyo nepamba pekuenda nekuda kwedenda.
Page 1 pamusoro 8 Prev Next